Ziyini zonke izakhi zezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sikhuluma ngesimo sezulu sendawo sikhuluma ngokuhlukahluka kwesimo sezulu esisebenza ngasikhathi sinye ukuqamba isimo esithile semvelo. Kuningi izakhi zezulu isenzo sokuyilolonga. Kulula ukudida imiqondo efana nemeteorology kanye nesimo sezulu. Kodwa-ke, yilokhu esikulungele. Kule ndatshana sizokufundisa umehluko omkhulu phakathi kwale mibono futhi sichaze zonke izinto zesimo sezulu nokwakheka kwazo.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izici ezakha isimo sezulu sendawo? Qhubeka ufunde futhi uzothola konke.
1 Isimo sezulu nesimo sezulu
2 Irejista yedatha
3 Izici ezingenelela esimweni sezulu
4 Ziyini izakhi zezulu?
4.2 Ukuzikisa, umswakama nengcindezi yasemkhathini
4.3 Isembozo sefu, umoya nemisebe yelanga
Uma sikhuluma ngesimo sezulu sibhekisa kulokho okwaziwa kakhulu ngesimo sezulu. Isikhathi yilokho ekwenzayo namuhla noma kusasa. Okungukuthi, lina, libalele, liba nomoya onamandla, amazinga okushisa aphezulu, iqhwa, njll. Lesi setha se Izimo zezulu zinganikezwa nganoma yisiphi isikhathi. Yebo, isethi yazo zonke lezi zimo ngokuhamba kwesikhathi iqoshwa njengesimo sezulu.
Ngakho-ke, Isimo sezulu yisamba sokuguquguquka kwesimo sezulu okwenzeka ngokuhamba kwesikhathi futhi ezakha izici zendawo. Isibonelo, isimo sezulu ngokuqhubekayo endaweni yisimo sezulu. Isimo sezulu saseMedithera ibonakala ngokuba namazinga okushisa aphezulu ehlobo nobusika obubanda nobumanzi. Imvula zigxila ezinyangeni zasebusika, kanti ehlobo ziyoma.
Lezi zici yizo ezakha isimo sezulu se-Iberia Peninsula. Ngamanye amagama, iqiniso lokuthi usuku olulodwa noma ezimbili sinemvula alichazi isimo sezulu sendawo, kepha kunalokho irekhodi eliphelele lale mvula eminyakeni neminyaka. ISpain inezimvula ezijwayelekile ngonyaka cishe amalitha angama-650 ngemitha eyisikwele. Ngokuvamile, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile kufanele line cishe leli nani ngonyaka. Kujwayelekile impela ukuthi le datha ayinembile ngo-100% njengoba kungaba neminyaka emibili yemvula neminyaka eyomile.
Le mininingwane itholakala njengenani eliphelele lenani lokuhlukahluka kwesimo sezulu futhi yonke eminye idatha ekude kakhulu nencazelo ayisetshenziswanga ukuthola inani elisho. Okusho ukuthi, uma unyaka lina kakhulu imvula ina cishe ku-1000mm, ngeke isetshenziswe ngoba ayijwayelekile.
Ukuhluka kwesimo sezulu njengokuvama nokuqina komoya nakho kuyarekhodwa eminyakeni edlule. Izici ezihlala njalo kuphela njengoba zinjalo ukwandisa ukuhlushwa kwezinhlayiya ezithile noma ukungcola emkhathini kungaguqula isimo sezulu sendawo esikhathini eside. Ngokwesibonelo, ukuguquka kwesimo sezuluNjengoba igama layo liphakamisa, kunguchungechunge lwezinguquko eziguquguqukayo zezulu eminyakeni edlule ezenza ukuguquka kwesimo sezulu.
Ukuhlukahluka emhlabeni wonke okushintsha kakhulu ukushisa. Ngenxa ye- ukufudumala kwezwe ngenxa yokugcina ngokweqile ukushisa ngu amagesi abamba ukushisa kubangela ukwanda kwezinga lokushisa. Lokhu kwanda kubangela eminye imiphumela kokunye okuguquguqukayo kwesimo sezulu okuguqula isimo sezulu. Isibonelo, amazinga okushisa anyukayo ashintsha umswakama nemvula endaweni. Ngokungabi nemvula efanayo, izimila nezilwane eziyigcinayo nakho kuyashintsha. Lezi zinguquko ezincane zinomthelela wokusebenzisana ezingeni elikhulu eliguqula isimo sezulu sendawo.
Amarekhodi abaluleke kakhulu ocwaningweni hhayi nje ngokwenzeka kithina namhlanje, kodwa futhi kuyasisiza nokwazi isimo sezulu ebesinaso eminyakeni eyizigidi eyedlule. Ukwazi ushintsho izimo zezulu ezahlukahlukene zomhlaba eziye zabhekana nalo kuwo wonke umlando, sizokwazi ukwazi ukuthi yimiphi imingcele esingayimisa ngaphandle kokubeka engcupheni ukusinda kwesintu.
Izici ezingenelela esimweni sezulu
Ngaphandle kwezakhi zesimo sezulu sinezici ezisibekayo. Phakathi kwabo siyathola ukuphakama nobubanzi, isimo sendawo, amanzi nemisinga yasolwandle. Zonke lezi zinto zingenela ngandlela thile ezicini zesimo sezulu sendawo. Isibonelo, akulona inani elifanayo lemisebe yelanga eliwela ebusweni bomhlaba enkabazwe njengasezigxotsheni. Imisebe yelanga igadla kakhulu emgqeni wezindawo ezishisayo, kuyilapho kuzo zombili izigxobo ifika ithambekele.
Ngalesi sizathu, amandla enza ukuthi umhlaba nomkhathi ozungezile ushise awusatshalaliswa ngokulinganayo kuyo yonke iplanethi. Kungashiwo okufanayo ngokuphakama. Ngamamitha ayi-100 wonke esiwenyuka phezulu, izinga lokushisa lehla ngama-3 degrees futhi ngayo, kanjalo nengcindezi yasemkhathini. Lokhu kwenza izimo zezemvelo zilungele olunye uhlobo lokuthuthuka kwempilo. Azikho izinhlobo eziningi zezilwane nezitshalo ezihlala ngaphezu kwamamitha ayi-3000 ukuphakama kunikezwe izimo ezingezinhle.
Ukuntuleka kokudla, umbuso womoya ophakeme, uhlaza oluncane, njll. Lezi yizimo esizithola phezulu futhi ezingasizi ngalutho ekuthuthukiseni izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.
Ziyini izakhi zezulu?
Ngakho konke okubonwe kuze kube manje, kufanele sisho ukuthi izakhi zezulu ziyini.
Siqala ngokushisa. Kungenzeka ukuguquguquka okubaluleke kakhulu emhlabeni jikelele, ngoba iyona ebeka ikakhulu intuthuko yempilo. Ngamandla anqwabelene emoyeni nasemhlabathini. Izinga lokushisa kufanele libe nohlu lwamagugu adingekayo enhlotsheni ngayinye yokuthuthukisa nokuhlala endaweni.
Amafu, umoya nemvula kuguqula izinga lokushisa ngaphezu kwenani le- imisebe yelanga eza phezulu.
Ukuzikisa, umswakama nengcindezi yasemkhathini
Izulu lendawo yilezi umthombo wamanzi wendawo nokugcinwa komswakama wezemvelo. Ngenxa yayo, izimila zingachuma futhi zidale ukugeleza okudingekayo ukuze kube khona imifula, amachibi, imifudlana, njll. Ingxenye yala manzi ilahleka futhi ngenqubo yokuhwamuka futhi iveza okwehlukile izinhlobo zamafu.
Umswakama inani lomhwamuko wamanzi emoyeni. Isilinganiso salokhu sinqunyiwe, njengoba sishilo phambilini, ngombuso wemvula wendawo. Lapho isifunda sinamazinga okushisa nemvula amaningi, umoya uba namandla amaningi okubamba umusi wamanzi.
Ingcindezi yasemkhathini yilokho amandla akhishwa ngumoya kithi nangaphezulu komhlaba. Ungasho ukuthi yilokho okusindwa umoya. Njengoba sikhuphukela phezulu, ingcindezi yasemkhathini incipha ngokuncipha.
Isembozo sefu, umoya nemisebe yelanga
Inani lamafu ku-troposphere nganoma yisiphi isikhathi futhi liyinto yesimo sezulu ngoba linomthelela kwezulu, inani lemisebe yelanga efinyelela ngaphezulu, ngakho-ke, inani eliyivumela ukuthi libuyele emkhathini, njll. .
Umoya ukunyakaza komoya futhi inquma ukuguquguquka kwesimo sezulu esithile njengomswakama wezemvelo, izinguquko kumfutho womoya futhi kube nomthelela ekuhwamukeni kwamanzi.
Ekugcineni, imisebe yelanga yiyo enikeza ukushisa ebusweni bomhlaba nomoya. Lapho imisebe yelanga ifinyelela phezulu ibizwa ngokuthi yi-insolation. Le radiation ibhajwe amagesi abamba ukushisa namafu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezakhi zezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Izimo zezulu